600A Qalabka Qalabka Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha 600A Cable Accessories Warshad
600A 15kV Dhimashada Wadajirka ah ee Iskujira
Anhuang oo ku takhasusay Isku-dhafka Isku-dhafan ee Isku-dhafan, waxaan siineynaa tayo sare leh Isku-dhafnaanta Burburka. Guud ahaan ： 600A Isku-dhafka Dhinta ee Burburka ama Vacuum Switch Bushing ayaa loogu talagalay Golaha Kaanta ee Golaha oo leh Sf6 Loadbreak biiro. Xidhiidhiyayaasha kala go ', sida 600A T iyo T-11 isku xirayaasha nasashada dhimatay ayaa loo isticmaali karaa bushingkan. Dhirta waxaa lagu sameeyaa Epoxy Resin. Iyada oo goonnada ka dhigo jebinta dhimashada Rotatable Feed-ilaa bushing si fiican ayaa loo isticmaali karaa. Waxyaabaha ku jira Kit ： nt lntegral Deadbreak Bushing ● I ...
600A dilaaga Tee tubada isku xira
Anhuang oo ku takhasusay barnaamijka loo yaqaan 'Deadbreak Tee Tap Connector', waxaan siineynaa isku xira Tee Taprap oo tayo sare leh. Qaab-dhismeedka: Isku-xidhka fur-furka: marooji-dahaadh duuban oo laba-madax leh, iyo shaashadda si loo hubiyo isku-dubbaridasho dhow. Goobta loo yaqaan 'Crimp terminal': Waxay kuxirantahay qalabka fiilooyinka, dooro terminal naxaas ama naxaas aluminium ah. Lakabka semiconducting-ka ee dibedda: caag tabinta ah oo loo yaqaan 'EPDM prefabricated conductive and cable shielding' si loo gaaro gaashaan isdaba joog ah, iyo in la hubiyo in qeybta hoose ee Dhaqanka ...
600A Isgoyska dilaaga gaarka ah
Anhuang oo ku takhasusay qaabdhismeedka busbar, waxaan ku siineynaa Isgoys dillaacsan oo gaar ah oo tayo sare leh. Guud ahaan ： 200A / 600A Isgoyska dilaaga gaarka ah wuxuu bixiyaa labo, seddex ama afar 200A oo xamuul ah iyo 600A nasasho dhimis ah, 15kV iskudhaf iskudhaf ah oo hal dhinac ah isla markaana basaska wada buuxiya isla markaana buuxiya dhamaan shuruudaha ANSI / IEEE 386-Nidaamyada Iskuxira Dahaarka. Markaad ku dhejisid shey qiime ahaan la qiimeeyay, isgoysku wuxuu si buuxda u gaashaaman yahay, si buuxda u dahaadhan yahay, isku xirnaansho kala-goys ah oo loogu talogalay jabinta culeyska ama dhimashada ...
15kV24kV 600A Isgoysyada Busbar dilaaga ah
Anhuang oo ku takhasusay isgoysyada nasashada dhimashada, waxaan siineynaa isgoysyada nasashada dhimashada oo tayo sare leh. Guud ahaan ： 600A Isgoysyada goynta basaska dhimanaya ee khadka laanta fiilada ayaa doorka baska ka ciyaara. Tilmaamaheeda si buuxda ayaa loo daboolay, si buuxda ayaa loo xiray. 600A busbar wuxuu xiri karaa nooca T ee isku xiraha, T-II isku xiraha fiilada, 600A tuubo dheeri ah iyo 600A daboolka dahaaran oo leh halabuurka xarig fara badan. Isgoysyada busbar 600A ee loo yaqaan 'Deadbreak' ayaa laga sameeyay qalab tayo sare leh. Mawduucyada Kit body ● Busbar body ● Insta ...
15kV 600A Dahaarka Daboolka Dahaarka leh
Anhuang oo ku takhasusay Cap-ka Difaaca Dahaaran, waxaannu siineynaa Cap tayo sare leh oo dahaaran. Hordhaca guud ： 15kV / 24kV 600A Cap Protective Cap waa qalab siyaado ah oo loogu talagalay in lagu xiro xulafada koronto isla markaana si farsamaysan loo xiro shixnadaha kala goynta goos gooska. Markaad ku dhegsan tahay sheyga jebinta rarka iyo siligga bullaacaddu dhulka ku dhegsan tahay, Daboolka Difaaca Dahaaran wuxuu bixiyaa dabool dhammaystiran oo gaashaaman, oo lagu dabooli karo keymaha tamarta leh. Daboolka Difaaca Dahaaran ayaa la isticmaali karaa ...
15kV24kV 600A Burburka dhintay T Isku xidhka koronto
Anhuang oo ku takhasusay qalabka loo yaqaan 'Deadbreak Tee fur', waxaan siineynaa isku-xiraha isku-xirnaanta 'Deadbreak Tee pug Connector' oo tayo sare leh. Guud ahaan ： 600A Dead break T Isku xirayaasha Isku xirayaasha waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro laba ama in ka badan 600A qalabka joojiyayaasha. Qalabka dhimista isku xiraha isku xidhka ah waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa kala-goynta kala-goysyada ah, ama fidinta duurka, si loo kordhiyo masaafada saxanka hore ee qalabka illaa 600A terminator, iyadoo la fududeynayo tababarka fiilada. Suxullada Xamuulka Xamuulka ayaa lagu mideeyaa iyadoo la adeegsanayo qalab tayo sare leh oo baaruud ah oo daaweyn iyo nus-qabasho ...
600A Loadbreak Yaraynta Tubada Plug
Anhuang oo ku takhasusay Loadbreak yareynta tuubada tuubada, waxaan ku siineynaa Loadbreak yareynta qasabada tuubada. Guud: 600A / 200A Integral Dead break Bushing waxaa loo isticmaalaa in loogu beddelo heerka caadiga ah ee dhimista dhimista 600A heerka caadiga ah ee 200A load break interface. Waxaa loo adeegsaday daboolida dahaarka 200A, MOV Elbow Arrester, Grounding Elbow ama Load break Elbow Connector, Iskuxirida jebinta dhimashadu waa mid si buuxda u gaashaaman. Waxay noqon doontaa T-ne isku xiraha haddii lagu xiro T isku xiraha. Tusmada Qalabka: Loadbreak Re ...
600A T Xiriiriyaha Dilaaga
Anhuang oo ku takhasusay Iskuxiraha loo yaqaan 'Deadbreak Connector', waxaan siineynaa iskuxiraha mashiinka nasashada ee tayo sare leh. Hirgelinta jaangooyooyin: system Nidaam isku-xira dahaaran oo kala-go'an oo loo qaybiyo nidaamyada kor ku xusan; ANSI / IEEE Std386-2006600V ● Jaakadaha loo yaqaan 'semiconductor jackets' ee loogu talagalay fiilooyinka korantada sare iyo iskuxirayaasha daaqada kala go '; Cab Fiilooyinka korantada laga saaray ee korantada laga saaray iyo qalabkooda koronto leh oo lagu qiyaasay ka sarreeya 1 kV (Um = 1.2 kV) ilaa 30 kV (Um - 35 kV); Methods Hababka tijaabada ee loogu talagalay qalabka korontada ca ...